राजकुमार मात्रै होइनन् सिकारी | चितवन पोष्ट दैनिक
राजकुमार मात्रै होइनन् सिकारी
२०७१ फाल्गुन १५, शुक्रबार ०१:५४ गते
केही समययता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सफलतैसफलताको चाङ लाग्न थालेको छ । मानव र वन्यजन्तुबीचको सम्बन्धमा अपेक्षाकृत सुधार छैन । वन्यजन्तुले मान्छेमाथि आक्रमण गरेर ज्यानै लिने र घरपालुवा पशु चौपाया र खेती नोक्सान गर्ने घटना कम भएका छैनन् । तर, वन्यजन्तु संरक्षण र चोरीसिकारी नियन्त्रणमा निकुञ्जले पाएको सफलता विश्वव्यापी चर्चामा छ । चोरीसिकार लगभग ठप्प भएर गएको छ भने गैँडाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु मारेर फरार रहँदै आएका खुंखार अपधारीहरु समेत धमाधम समातिन थालेका छन् ।
निकुञ्ज प्रशासन ६० सालको चैत्रदेखि राजकुमार चेपाङको पछाडि लागेको थियो । तर, उनी समातिए यही माघमा । उनको गिरफ्तारीको लामो कथा छ । राजकुमारलाई खुंखार सिकारी बताउँदै निकुञ्जले खोजी सुरू गरेको थियो । पछिल्लो समयमा जेजति समातिने गर्छन्, उनीहरुले राजकुमारले नै आफूलाई गैँडा मार्ने काममा सरिक गराएको बयान दिने गर्दथे । एकपछि अर्को गर्दै राजकुमारविरूद्ध चितवन निकुञ्जमा १५ वटा मुद्दा दायर भए, जसमध्ये छवटा मुद्दा फैसला नै भए । फैसला भएका सबै मुद्दामा वन्यजन्तु अपराधमा हुने सबैभन्दा ठूलो सजाय १५ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना भएको छ, राजकुमारलाई ।
यसरी फैसला भएको मुद्दालाई नै आधार मान्दा पनि राजकुमार वन्यजन्तु अपराधका खुंखार अपराधी हुन् । नेपालबाट मलेसिया पुगेका राजकुमारविरूद्ध इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी ग¥यो । रेड कर्नर नोटिस जारी भएको १५ महिनापछि गएको माघ १६ गते उनी मलेसियामा पक्राउ परे । त्यसपछि काठमाडौँ हुँदै उनी माघ २६ मा चितवन निकुञ्जको हिरासतमा आइपुगेका
छन् । निकुञ्जले उनका विरूद्ध गरेको दाबीलाई नै पुष्टि हुने गरेर राजकुमारले पनि बयान दिएका छन् । अर्थात्, राजकुमारले २० गैँडा मारेका रहेछन् । उनले गोली चलाउँदा थप अरु पाँच गैँडा घाइते भएका रहेछन् ।
यी २५ बाहेक पनि अरुले मारेका थप दुई गैँडाको खाग झिकेर उनले अवैध कारोबार गरेका छन् । निकुञ्जले दिएको विवरणमा यही उल्लेख छ । साथै, फागुन ३ गते आइतबार पत्रकारबीच निकुञ्ज मुख्यालयमा सार्वजनिक हुँदा पनि राजकुमारले यो अपराध स्वीकार गरे । यस कारण निकुञ्जले राजकुमारका बारेमा जे भन्दै आएको थियो, त्यो असत्य थिएन भन्ने देखिन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि केही प्रश्नहरु सिर्जना भएका छन्, जसको तत्काल उत्तर भने भेट्टाउन मुस्किल नै छ । ती दुई–तीनवटा प्रश्नहरुका बारेमा केही चर्चा गरौँ ।
१) राजकुमारलाई गैँडा मार्न लगाउने को हो ?
गैँडा सिकारमा एक्लै कोही संलग्न हुँदैन । सिकारीको आँट र योजनामा मात्रै गैँडा मारिँदैन । निकुञ्ज अधिकारीहरुका अनुसार पनि गैँडा तस्करी सञ्जालभित्र सिकारी सबैभन्दा तल हुन्छ । सिकारीले गैँडा मारेर खाग स्थानीय व्यापारीलाई दिन्छ । स्थानीय व्यापारीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिएको कारोबारीलाई खाग पु¥याउँछ । यसरी खाग विदेश जानुभन्दाअघि सिकारीदेखि दुई तहको व्यापारीको सञ्जाल बनेको हुन्छ । यस हिसाबले गैँडा सिकारमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी, राष्ट्रिय कारोबारी, स्थानीय कारोबारी र सिकारीको तह हुने गर्छ ।
निकुञ्जले सार्वजनिक गरेको विवरणमा राजकुमार स्थानीय तहको नाइकेमात्रै भएको उल्लेख छ । अर्थात्, उनले गैँडा मार्दथे र बढीमा त्यो गैँडाको खाग अन्तर्राष्ट्रिय तहको व्यापारीको सम्पर्कमा रहने राष्ट्रिय कारोबारीलाई उपलब्ध गराउँथे
भन्ने हो ।
यसरी हेर्दा राजकुमार अरु कसैका लागि गैँडा मार्दथे भन्ने अड्कल सहजै लाग्छ । उनले कसका लागि गैँडा मार्दथे ? उनलाई यसरी खुंखार सिकारी बन्न कसले प्रेरित ग¥यो ? उनलाई यो काममा लगाउनेहरु र सघाउनेहरु समातिएका छन् वा नाइँ ? राजकुमारले भनेमा ती पक्राउ पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । निकुञ्जले यसबारेमा केही कुरा सार्वजनिक गरेको छैन । राजकुमार पनि यो विषयमा केही बोल्दैनन् । कसरामा उनीसँग सोधिएको पनि थियो, कसले यो काममा लगायो भनेर तर उनी उत्तर दिन तयार भएनन् ।
यी प्रश्नको उत्तर दिन निकुञ्ज तत्पर हुनैपर्छ । सिकारीभन्दा खतरनाक कारोबारी हुन् । कारोबारीको त्यो सञ्जाललाई निकुञ्जले धक्का दिन नसके हिजो राजकुमारलाई सिकाएकाहरुले आज प्रतिकूल अवस्थामा केही नगर्लान्, तर भोलि अनुकूल हुनासाथ अर्को सोझासादालाई हतियार बनाएर गैँडा मार्न पठाउने सम्भावना प्रबल छ । राजकुमारले पनि यतिसम्म त भनेका थिए, ‘धेरै कुरा थाहा नपाएको मलाई कसैले राम्रो कमाइ हुन्छ भनेर पठायो र गैँडा मारियो ।’ यस्तै कुराले अरु कोही नलोभिएला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसका लागि गैँडा मार्ने काममा खटाउनेहरुको पनि पर्दाफास हुन आवश्यक छ ।
२) अरु गैँडा कसले मा¥यो त ?
जति नै खुंखार भने पनि राजकुमारले मारेका २० वटा गैँडा हुन् । चितवन निकुञ्जमा योभन्दा धेरै गैँडा मरेका छन् । अझ राजकुमार चोरीसिकारमा सक्रिय हुनुभन्दा अगाडि झनै धेरै गैँडा मरेका छन् । र, राजकुमार सक्रिय भएका बेलामा पनि २० वटाभन्दा अति धेरै गैँडा मरेका छन् । अब सवाल उठ्छ, ती गैँडा कसले मारे ? उनीहरु पनि समातिए वा समातिएनन् ? पछिल्लो समय राजकुमारजस्तै केही खुंखार सिकारीहरु काजीमान चेपाङ र बुद्धिबहादुर चेपाङ समातिएका
छन् । तर, उनीहरुले पनि राजकुमारका लागि नै काम गरेको देखिएको छ ।
निकुञ्जले दिएको विवरणअनुसार राजकुमारले पहिलोपटक विसं २०६० सालको माघ १० मा निकुञ्जको चप्परचुली क्षेत्रमा गैँडा मारेका हुन् । त्यसपछि ६७ सालको असोज १५ मा उनले निकुञ्जकै जर्नेली क्षेत्रमा अन्तिमपटक गैँडा मारेका छन् । यसबीचमा २० वटामात्रै गैँडा मरेका छैनन् । निकुञ्जले दिएको विवरणअनुसार ६० सालदेखि ६७ सालसम्म गणना गर्दै आउँदा ९, १५, १०, १४, ३, १२, ११ र दुईवटा गैँडा चोरीसिकारीका कारण मरेका छन् । ६७ सालमा मरेका दुईवटा गैँडामध्ये एउटा राजकुमारले अन्तिमपटक मारेको भनिएको समयभन्दा पछि मरेको छ । त्यसैले, राजकुमार सक्रिय हुँदा ६६ वटा गैँडा मरेको देखिन्छ ।
अर्थात्, राजकुमारले मारेका २० वटाबाहेक अरु गैँडा कसले मारेको थियो ? ती समातिए कि नाइँ ? भन्ने ज्वलन्त प्रश्न खडा हुन्छ । अझै रोचक कुरो त के छ भने निकुञ्जमा अत्यधिक गैँडा सिकार हुने समय राजकुमार सक्रिय हुनुभन्दाअगाडि थियो । निकुञ्जमा चोरीसिकारीले एकै वर्षमा ३७ वटासम्म गैँडा मारेका थिए । त्यो समय राजकुमारको उदय हुनुभन्दा दुई वर्षअघि अर्थात् ५८ सालको थियो । राजकुमारले गैँडा मार्न छाडेपछि चोरीसिकार ठप्पजस्तै भएर गएको छ । तर, सिकारी उनीमात्रै होइन रहेछन् भन्ने यी विवरणहरुले देखाउँछन् । ती सिकारीहरु पनि समातिए त ? नभए फेरि उनीहरु मौकाको पर्खाइमा छन् । होसियार हुनु अति जरूरी छ ।
३) कसले पठायो राजकुमारलाई मलेसिया ? ः
जसरी कसैले तालिम र निर्देशन नदिई राजकुमारले गैँडा मार्न थाले भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन, त्यसरी नै उनी एक्लो प्रयासमा मलेसिया पुगेका हुन् भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । चितवन जिल्लाको पहाडी गाविस कोराकको विकट गाउँ कालीखोलकाका बासिन्दा राजकुमारलाई कालीखोले कान्छो भनेर चिन्ने धेरै छन् । अपराध दुनियाँमा राजकुमारका नामले चिनिएका उनले नाम फेरेर नागरिकता निकाले अनि त्यसैको आधारमा राहदानी निकालेर मलेसिया लागे । पक्का मंगोलियन राजकुमारले नागरिकता बनाएका छन्, आर्य समुदायभित्र पर्ने भक्तराज गिरीको नाममा । यो तहको फर्जी काम गर्न उनको मात्रै हात होला ?
निकुञ्जले दिएको विवरणमा उनले ६७ सालको जेठ १० मा गोरखाबाट फर्जी नागरिकता लिएको देखिन्छ । नागरिकता बनाएपछि पनि उनले असोज १५ मा एउटा गैँडा मारेका छन् । नागरिकता बनाउँदा उनी तस्कर सञ्जालको सम्पर्कमा थिए भन्ने पक्का भएको छ । निश्चय नै यस्ता फर्जी काममा उनलाई सञ्जालका उपल्लो कारोबारीहरुको पनि भरपूर मद्दत छ । नभए, त्यो तहको फर्जी काम गर्न सम्भव हुनेथिएन । फर्जी नागरिकता प्रकरणको पनि छानबिन गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । यसबाट उनका सहयोगीहरुको खुलासा होला वा नहोला ? अर्को प्रश्न त्यो पनि हो ।
राजकुमार चेपाङको गिरफ्तारी वास्तवमै संरक्षणका दृष्टिले निकै मह¤वपूर्ण हो । अपराधीहरु जे–जसरी लुक्न खोजे पनि समातिन गाह्रो छैन भन्ने यो घटनाले देखाउँछ । यो सन्देश राम्रोसँग प्रवाह भए अपराध दुनियाँमा ल्याउन प्रेरित गर्नेहरु फतक्कै गल्नेछन् । तर माथि जेजति प्रश्न उब्जे, त्यसको निराकरण हुन सक्दैन भने निकुञ्जले वन्यजन्तु अपराध सञ्जाललाई तहसनहस पार्न अझै धेरै गर्नुछ भन्ने देखाउँछ ।